တရုတ်သုံးဖက်မြင် LCD သည် rs485 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် display multi-function အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ | ချွေတာ
3Phase 4wire စွမ်းအင်မီတာ
3Phase 4wire စွမ်းအင်မီတာ (ic card)
3Pase 4wire စွမ်းအင်မီတာ （ဝေးလံခေါင်သီ）
Single phase din ရထားလမ်းစွမ်းအင်မီတာ （အဆောင်။
တစ် ဦး တည်းအဆင့် din ရထားလမ်းစွမ်းအင်မီတာ （ic ကဒ်)
တစ် ဦး တည်းအဆင့် din ရထားလမ်းစွမ်းအင်မီတာ （ဝေးလံသော）
embedded Multi- function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ
သုံးဆင့် LCD သည် rs485 နှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ် display multi-function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ embedded
စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး terminal ကို
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး terminal (gprs.lora)
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး terminal (လိုင်း ၄ ခု)
Single- အဆင့် Multi- function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ
Single- အဆင့်ရိုးရှင်းတဲ့ Multi- function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ
သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သည့် multi-function အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ
3Phase 4wire ကြိုတင်ငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာ (ic card)
3Phase 4wire ကြိုတင်ငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာ (အဝေးထိန်း)
3Phase ကြိုတင်ငွေဖြည့်စွမ်းအင်မီတာ (ic card)
တစ်ခုတည်းသောအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ （ic card + module）
တစ်လုံးတည်းသောအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ （ic card）
အဆင့်တစ်ခုတည်းစွမ်းအင်မီတာ （ဝေးလံခေါင်သီ + module）
တစ် ဦး တည်းအဆင့်စွမ်းအင်မီတာ （ဝေးလံခေါင်သီ）
single phase prepaid စွမ်းအင်မီတာ energy ic card）
သုံးဆင့်အီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ （carrier, lora, gprs
Ic ကဒ်ကြိုတင်ပေးဆောင်ရေမီတာ IC
Single-phase ရိုးရှင်းသော multi-f ...
သုံးဆင့်သော LCD တပ်ဆင်ထားသော di ...
Din ရထားလမ်းတစ်ခုတည်းအဆင့်စွမ်းအင် ...
သုံးဆင့်သော LCD သည် rs485 နှင့်အတူ multi-function ကိုအီလက်ထရောနစ်စွမ်းအင်မီတာ embedded ဒစ်ဂျစ်တယ် display ကို
တပ်ဆင်ထားသည့်သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သော multi-function တူရိယာ၊ ပရိုဂရမ်မာတိုင်းတာမှု၊ ပြသမှု၊ RS485 ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သွေးခုန်နှုန်းတို့ပါ ၀ င်သည့်အသိဉာဏ်ရှိလျှပ်စစ်တူရိယာတစ်မျိုး၊ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ တက်ကြွသောစွမ်းအင်၊ အချက်အလက်ပြသခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့ကို၎င်းအတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်းခွဲရုံအလိုအလျောက်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအလိုအလျောက်၊ အသိဉာဏ်ရှိသောအဆောက်အအုံများနှင့်စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း၊ တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည်အဆင့် ၁ ဖြစ်ပြီး LCD သို့မဟုတ် LED ပေါ်ရှိ ၀ င်းဒိုးပေါ်ရှိမြင်ကွင်းနှင့်ဝေးလံသော RS485 ဒီဂျစ်တယ် interface ဆက်သွယ်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်သည်။ ၎င်းသည် DL / T645-2007 protocol နှင့် standard MODBUS-RTU ဆက်သွယ်ရေး protocol နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
1.Flame နှောင့်နှေး, install လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်
2.Large backlight, ကြီးမားသော LCD, ကြည်လင်ပြတ်သားသော display
၃။ မျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်တွင်အလှည့်သုံးဖက်မြင်ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ တက်တက်ကြွကြွ / ဓာတ်ပြုစွမ်းအား၊ ပါဝါအချက်နှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုပြသနိုင်သည်
4. ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ဒေတာများကိုတစ်ချိန်တည်းထုတ်လွှင့်ရန်ချန်နယ် ၂ ခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
5. ပရိုဂရမ်လုပ်ထားသော function နှင့်အတူထရန်စဖော်မာအချိုးကိုစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၆။ ဝါယာကြိုးနည်းလမ်း - သုံးဆင့်သုံးကြိုး၊ သုံးဆင့်လေးဝါယာကြိုးစသည်။
7.voltage စံချိန်စံညွှန်းများ: 380V / 100V / 57.7V နှင့်အခြားသူများ, အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ကြသည်။
၈။ ဆီလီကွန်ခလုတ်၊ ထိတွေ့ခံစားမှုနှင့်ကြာရှည်အသုံးဝင်သောအချိန်
9. တပ်ဆင်မှုကလစ်သည်ချိုးရန်မလွယ်ကူပါ၊ အလွန်ခိုင်မာသည်
ကိုးကားစရာဗို့အား 220V / 600V
တိကျမှန်ကန်မှုအဆင့် Active level 1
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ≦ 5VA
ဒစ်ဂျစ်တယ် interface ကို လိုင်း2RS485, MODBUS-RTU （DL645-2007）
output ကို Pulse လိုင်း 1
အပူချိန်အကွာအဝေး အလုပ်လုပ်အပူချိန်အကွာအဝေး -10 ~ 55 ဒီဂရီ,
သိုလှောင်အပူချိန်အကွာအဝေး -20 ~ 75 ဒီဂရီ
97 * 97
၁။ လျှပ်စစ်မီတာကိုမီတာသေတ္တာအတွင်းသို့ တင်၍ interface ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဒါဟာကြေးဝါဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ကြေးနီ terminal ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။
2.Voltage input: Input voltage သည်ထုတ်ကုန်၏ 220VV input voltage ထက်မကြီးသင့်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက PT အားထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
3.Current input - စံသတ်မှတ်ထားသော input current သည် 5A ဖြစ်သည်။ 5A ထက်ပိုသောပြင်ပမှန် CT လက်ရှိထရန်စဖော်မာ)အသုံးပြုသင့်သည်။ အခြားတူရိယာများအသုံးပြုသော CT နှင့်ချိတ်ဆက်ပါကဝါယာကြိုးသည်စီးရီးဖြစ်သင့်သည်။ လက်ရှိ input wire ကိုမဖယ်ရှားမီ CT မူလတန်း circuit ကို disconnect ဖြစ်စေ၊ အလယ်တန်း circuit ကိုတိုစေပါ။
–Input voltage နှင့် current သည်တူညီသောအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်နှင့်အဝင်နှင့်အထွက်လမ်းကြောင်းများအတူတူဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ မဟုတ်ရင်တန်ဖိုးများနှင့်သင်္ကေတများမှားသွားလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ Din ရထားလမ်းတစ်ခုတည်းအဆင့်စွမ်းအင်မီတာ
နောက်တစ်ခု: လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး terminal (gprs.lora)
Kwh မီတာဒီဂျစ်တယ်3အဆင့်
အမှတ် ၂၅၆၊ Xincheng လမ်း၊ Huankeyuan၊ Yixing၊ Wuxi, Jiangsu, China